Unqulo & Umoya Ukuba ngumBuddha
Zininzi izikolo ezahlukeneyo zobuBuddha ezineentlobo ezahlukeneyo zeemfundiso kunye nezenzo. Uyazi ukuba ngubani na onelungelo kuwe?
Nantsi isicwangco esisisiseko kwizinto ezikhethekileyo zehlelo lobuBuddhism Eli nqaku linika iingcebiso malunga nendlela yokufumana indlela yakho kuyo yonke le ntlukwano.
Amagosa amaninzi ukuya kwelinye iDharma
Izikolo ezininzi zaseBuddha zisebenzisa iindlela ezahlukeneyo zobuchule ( upaya ) ukunceda abantu baqonde ukukhanya , kwaye bachaza ubuBuddha ngeendlela ezahlukeneyo.
Ezinye izithethe zigxininisa isizathu; abanye ukuzinikela; abanye ubuxoki; zininzi zidibanisa zonke ezo, ngandlela-thile. Kukho izithethe ezigxininisa ukucamngca njengendlela ebaluleke kakhulu, kodwa kwezinye izithethe, abantu abakucingi ngako konke.
Oku kungadideka, kwaye ekuqaleni, kunokubonakala ngathi ezi zikolo zifundisa izinto ezahlukeneyo. Nangona kunjalo, abaninzi bethu bafumanisa ukuba njengoko ukuqonda kwethu kukhula, ukungafani kubonakala kungabalulekanga.
Okokuthi, kukho ukungavumelani kwemfundiso phakathi kwezikolo. Ngaba oku kubalulekile? Ukuze usebenze okwesikhashana, mhlawumbi kunokuvelisa ukukhathazeka ngamaphuzu amahle emfundiso. Ukuqonda kwakho imfundiso kuya kutshintshwa ngokuhamba kwexesha, nokuba kunjalo, ngoko ungasheshi ukugweba ukuba isikolo "sinene" okanye "siyiphutha" de ube uchithe ixesha kunye nalo.
Kunoko, cinga indlela i- sangha ethile evakalelwa ngayo. Ngaba uyamkela kwaye uyamxhasa? Ingaba iintetho kunye neeturgy "zithetha" kuwe, nangona kunamaqondo abuqilileyo?
Ngaba utitshala unalo idumela elihle? (Jonga kwakhona " Ukufumana uMfundisi Wakho .")
Ingxaki ebaluleke kakhulu kuninzi eNtshona ifumana utitshala okanye uluntu lwaluphi na isiko kufuphi nalapho bahlala khona. Kukho amaqela angaqhelekanga kwingingqi yakho ocamngca nofundisisa kunye. Kukho kwakhona ukuba amaziko eBuddhist asondele ngokukhawuleza ukutyelela "uhambo lomhla." I-Buddhanet ye-World Buddhist Directory yincwadi efanelekileyo yokufumana amaqela kunye namatempileni kwiphondo okanye iphondo lakho.
Qala apho ukhona
I- dharma kwisiko kufuphi nawe ingaba yesikolo esivela kuloo nto ufundileyo malunga nokubamba umdla wakho. Nangona kunjalo, ukusebenzisana nabanye kubaluleke kakhulu kunokuba ufunde ngeBuddha kwiincwadi. Okungenani, zenze uzame.
Abantu abaninzi banamahloni ngokuya kwi tempile yaseBuddhist okokuqala. Ukongezelela, amanye amaziko e-dharma athetha ukuba abantu bafumane imigaqo yokuqala ngaphambi kokuya kwiinkonzo. Ngoko, shayela okokuqala, okanye ncinane ukhangele iwebsite yeziko lemigaqo-nkqubo yabo yokuqala ngaphambi kokuba ubonise emnyango.
Unokuba nohlobo olukhuthaza ukuba ujoyine i-dharma kunye neziko njengoko wenzayo. Kulungile, kodwa ungazivumeli ukuba ucindezelwe ukuba ungene into engafanelekanga kuwe. Kungenzeka ukuba umkhangeli osebenza kumhlobo wakho konke ukuphosakela kuwe.
Ukuba ufanele uhambe, khangela i-monastery okanye i-centre yokunikezela ngezinga eliqalayo lokuhlala kwiindawo zokulala.
Ngaba Andikwazi Ukwenza Oku?
Ngokuqhelekileyo abantu banqabe ukuba yingxenye yommandla wamaBuddha. Bafunda iincwadi malunga nobuBuddha, fundisa ukucamngca kwiividiyo, kwaye usebenze yedwa. Kukho ingxaki ngeendlela ezizodwa, nangona kunjalo.
Enye yeemfundiso ezisiseko zeBuddhism yi- anatta , okanye ingenjalo.
UBuddha wafundisa ukuba into esiyicinga ngathi "mna" yinto engafaniyo, kwaye ukunganeliseki okanye ukungonwabi ( dukkha ) kuvela ngokubambelela kuloo ngcamango. Ukukhanyela ukunyamekela ukusebenzisana nabanye kukubonakalisa ukuzinamathela.
Oko kwathiwa, abaninzi abantu bazifumana behlala bodwa kuba bahlala kude ne tempile okanye utitshala. Ukuba unako ukulawula nangenye iveki ephumayo ngonyaka, hamba . Iyakwenza yonke intlukwano. Kwakhona, abanye ootitshala bazimisele ukusebenza kunye nabafundi abade bemimandla nge-imeyili okanye nge-Skype.
Kutheni Ndifanele Ndiyikhethe?
Mhlawumbi kukho amaziko amaninzi e-dharma kwindawo yakho. Kutheni ungacingi nje ubulumko babo bonke?
Kulungile kwithuba elithile, njengoko uhlolisisa kwaye ufunde, kodwa ekugqibeleni, kungcono ukhethe umkhuba omnye kwaye unamathele kuwo. Utitshala waseVipassana uJack Kornfield wabhala kwincwadi yakhe ethi A Path With Heart :
Ukuguqulwa kokomoya yinkqubo enzulu engenzekanga ngengozi.Sidinga ukuqeqeshwa ngokuphindaphindiweyo, ukuqeqesha kwangempela, ukwenzela ukuba siyeke imikhwadala yethu yangaphambili yengqondo size sithole kwaye sigcine indlela entsha yokubona. indlela yokomoya esiyidingayo ukuze siziphathe ngendlela echanekileyo. "
Ngokuzibophezela, ukusebenza ngokungathandabuzeki kunye nokudimazeka, siqhubela phambili kwaye sijonge kwi-dharma kwaye kuthi. Kodwa indlela ye "sampler" ifana nokumba ii-well-foot one well 20-foot foot. Awukude kakhulu ngaphantsi komhlaba.
Oko kwathiwa, akuqhelekanga ukuba abantu bakhethe ukutshintsha ootitshala okanye nezithethe. Awudingi imvume yomntu ukwenza oko. Kuphelele ngokupheleleyo kuwe.
Izikratshi kunye namacandelo
Kukho amahlelo eBuddhist kunye nabafundisi be-phony. Abantu abangenasiphi isiqhelo kwiBuddhism baye badlula njengeLasmas kunye nabaphathi beZen. Utitshala osemthethweni kufuneka ahlangane nesithethe saseBuddha, ngandlela-thile, kunye nabanye kweso sithethe kufuneka bakwazi ukuqinisekisa ubungqina.
Oku akuthethi ukuba "uthisha osemthethweni" utitshala olungileyo, okanye ukuba bonke ootitshala abazifundisayo baqhayisa abaculi. Kodwa ukuba umntu uzibiza ngokuba ngumfundisi ongumBuddha kodwa akaqatshelwa ngolo hlobo nayiphi na isithethe samaBuddha, oko kungathembekanga. Ayikho uphawu oluhle.
Ootitshala abathi bodwa banokukukhokelela ekukhanyeni kufuneka bagwenywe. Qaphela kwakhona izikolo ezibiza ukuba yiBuddha kuphela yinyaniso , kwaye zithi zonke izikolo zihlaziyekile.
Funda ngakumbi: Iincwadi zokuqala zeBuddha .
Ukucamngca kweBuddhist kunye nobusuku obumnyama
Kuthetha ukuthini ukuguqula ubuBuddha?
Imiba ye-Hot-Button neBuddha
Ngaba i-Dalai Lama ivumela umtshato wamaGay?
Iimfihlelo zabafileyo: iindawo ezilahlekileyo zeBhabheli
8 Infinity Facts Eza Kuphazamisa Ingqondo Yakho
Indlela yokubala Iphutha leepescent
Konke malunga neZakhiwo zoBukumkani boBukumkani
Imbali ye-Crossword Puzzles
Funda ukubala ngesiTaliyane
Abantu baseAfrika-Amerika kunye nabaPhathi bePentent-S
Ngubani owayengumthenwa waseTiyopiya eBhayibhileni?
Indlela Yokufumana Umntwana Wakho Ngendlela Yokubuyela KwiSikolo
Kwakudala Kangakanani Ama-Dinosaurs aphila?
Iigogo: Iinqwelo Zangaphambili Zemfazwe Yezinto Eziphilayo?